ပုဒ်မ ၂၆၁ ပြင်ဆင်ရေးမူကြမ်းကို ပူးပေါင်းကော်မတီ တင်သွင်းလာမည့် ဥပဒေကြမ်းနှင့် တစ်ပေါင်းတ?? - Yangon Media Group
ပြည်ခိုင်ဖြိုး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တင်သွင်းထားသည့် အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၆၁ ပြင်ဆင်ရေးမူကြမ်းကို ပူးပေါင်းကော်မတီမှ တင်သွင်းလာမည့် ဥပဒေကြမ်းနှင့် တစ်ပေါင်း တည်းလေ့လာစိစစ်ရန် ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်က အတည် ပြုလိုက်သည်။ ကျောင်းကုန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးသိန်းထွန်းနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၄၃ ဦးမှ လက် မှတ်ထိုးတင်သွင်းထားသည့် ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဒုတိယ အကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေမူ ကြမ်း (ပုဒ်မ ၂၆၁)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီက ”အဆို ပါဥပဒေကြမ်းကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ (၂ဝဝ၈ ခုနှစ်) ပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ ကတင်သွင်းလာမည့် ဥပဒေ ကြမ်းနှင့် တစ်ပေါင်းတည်းလေ့ လာစိစစ်ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း နှင့် အဆိုပါဥပဒေကြမ်းကို လွှတ် တော်တွင် ဆက်လက်အဆုံးအ ဖြတ်ရယူသင့်ကြောင်း” အစီရင် ခံစာတင်သွင်းခဲ့သည်။
ယင်းအတွက်ကြောင့် လွှတ် တော်တွင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာ ထောက် ခံမဲ ၃၈ဝ မဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ ၁၉၈ မဲနှင့် ကြားနေမဲ ၆ မဲရှိခဲ့ သဖြင့် ဥပဒေကြမ်းနှစ်ရပ်ကို တစ်ပေါင်းတည်း စိစစ်ဆောင် ရွက်ရန် လွှတ်တော်ကအတည် ပြုခဲ့သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးသည် မိမိတို့နိုင်ငံအတွက် အသက်တမျှ အရေးကြီးပြီး ဥပဒေများအားလုံး တွင် အရေးကြီးဆုံးဥပဒေဖြစ် သည့်အတွက် စိတ်ရင်းစေတနာ မှန်ဖြင့်ပြင်ဆင်ရန် လွှတ်တော် နာယက ဦးတီခွန်မြတ်ကပြော ကြားသည်။ ‘လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များအနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားစည်း လုံးညီညွတ်ရေး၊ အမျိုးသားရင် ကြားစေ့ရေး၊ တိုင်းပြည်တည် ငြိမ်အေးချမ်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် စိတ်ရင်းစေတနာ အမှန်နဲ့ ပြင်ဆင်သင့်၊ ပြင်ဆင် ထုက်တဲ့ပုဒ်မများကို အားလုံးက ဝိုင်းဝန်းဆန်းစစ်ဆွေးနွေးပြီး ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမှသာလျှင် ပြည်ထောင်စုကြီးနဲ့တကွ နိုင်ငံ သူ၊ နိုင်ငံသား၊ တိုင်းရင်းသားအား လုံးအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြော သည်။
”ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အရပါနေရခြင်းဖြစ်တယ်။ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ပါစ ရာမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာ ထွက်သွားမယ်။ ထွက်သွားရင် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်သူလူထုကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်တွေက ရှိနေမှာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ပါနေခြင်းအားဖြင့် ပြည်သူလူထုမှာ နစ်နာသွားတာ ဘာမှမရှိဘူး။ တပ်မတော်က ဖယ်ပေးလိုက်ရလို့ နစ်နာသွား တာဘာမှမရှိဘူး။ ကျွန်တော်တို့ က လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအရ လွှတ်တော်မှာ တပ်မ တော်သားကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းထည့်ပြီးတော့မှ လို အပ်တာကို ထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်ဖို့ အတွက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ဖို့ အတွက်ထည့် ထားတာဖြစ်ပါ တယ်”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ထိုင်ဝမ် ဒါရိုက်တာ Doze Niu လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်မှုကြောင့် တရားစွဲခံရ
ရေနံချောင်းမြို့၌ မိုးမရွာ၍ သီးနှံပင်များ ပျက်စီးမှုဖြစ်ပေါ်နေသည့် အတွက် မိုးရွာစေရန် လွန်??
အီးယူမှ ဗြိတိန်နုတ်ထွက်ရေး ဒုတိယအကြိမ် မဲပေးပါက နုတ်ထွက်ရေး သမားများ ရှုံးနိမ့်မည်ကို စိုး??
ရွှေတိဂုံစေတီတော် ကြံ့ခိုင်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ အထပ်မြင့်ကွန်ဒို အေ?
အမေရိကန် ကုန်ပစ္စည်းများကို တရုတ်က အခွန်တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည်ဟု ကြေညာပြီးနောက် နှစ်နိုင်ငံ